एकदम अक्सर भन्ने आदेश गर्दा स्थापना वा आफ्नो SSL प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर त्रुटिहरू को एक किसिम मा देखा पर्न सक्छन् हुन्छ। त्यसैले, कसरी त्रुटि सच्याउन SSL?
म साइट को unreliability बारेमा एउटा सन्देश किन प्राप्त गर्छन्?
तपाईं कुनै पनि साइट लोड गर्न प्रयास गर्दा तपाईँको ब्राउजर यदि जडान यसको प्रमाणपत्र हस्ताक्षर गरिएको छ कि छैन र आदिवासी अर्थ, अविश्वसनीय छ भन्ने बताए। कहिलेकाहीं ब्राउजर बस एक प्रमाणपत्रलाई आदिवासी साथ सँगै जोड्न सक्नुहुन्न। तपाईं निरपेक्ष निश्चितताका साथ साइटको प्रमाणपत्र मुख्य केन्द्र को आधिकारिक हस्ताक्षर छ भनेर भन्न सकिन्छ भने, त्यसपछि SSL- सर्भर त्रुटि अर्थ मात्र एउटा कुरा: जडानहरू को माला जहाँ केही स्थापित एक मूल थियो। यस मामला मा, एक सन्देश तपाईं लगातार वेब स्रोत जान प्रयास गर्दा पप अप हुनेछन्। कसरी यस मामला मा SSL त्रुटि समाधान गर्न? जडानहरू को सम्पूर्ण श्रृंखला, वा प्रमाणपत्र हस्ताक्षर बाटो हेर्न प्रयास गर्नुहोस्। इन्टरनेट एक्सप्लोरर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईँले माथि पट्टी मा "प्रमाणीकरण पथ" मा क्लिक गरेर त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ। प्रमाणपत्र श्रृंखला को स्थापना संग कुनै पनि समस्या को घटना मा प्रमाणपत्रहरू घोषणा जो केन्द्र, मदतको लागि सोध्नु राम्रो छ। तपाईं अतिरिक्त निर्देशन दिइनेछ।
किन सुरक्षित वेब-स्रोतहरू कहिलेकाहीं रिपोर्ट छ unreliability?
यस्तो त्रुटि एकदम अक्सर यी दिन पूरा गर्न सक्छन्। यो SSL प्रमाणपत्र मा दर्ता गरिएको छ कि कुल वा डोमेन नाम ब्राउजर पट्टीमा छ मेल खाँदैन भन्ने हो। उदाहरणका लागि, तपाईं साइट प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, प्रमाणपत्र लेखिएको छ www, तर यो प्रविष्ट गर्नुभएन ठेगाना पट्टी, त्यसपछि तपाईंलाई एउटा सन्देश वेब स्रोत को unreliability देखा छ। कसरी यस मामला मा SSL त्रुटि समाधान गर्न? धेरै सरल। पहुँच को सही ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्।
साथै, कहिलेकाहीँ पृष्ठ यो एक विश्वसनीय र अविश्वसनीय डाटा संकेत गर्दछ। यो यदि अविश्वसनीय स्रोतबाट लोड वस्तुहरूको एक हुन्छ। सामान्यतया, यो त्रुटि जब तपाईं चित्र, जाभास्क्रिप्ट र फ्रेम डाउनलोड गर्न प्रयास हुन्छ। SSL त्रुटि कसरी मिलाउने सबै स्रोतहरू विश्वसनीय हुँदा? मूर्तिलाई सबै सन्दर्भहरू परिवर्तन गर्नुहोस्। वेब पेज खोल्न र अविश्वसनीय साइट http खोजी: यो रूपमा निम्नानुसार गर्न सकिन्छ //। मूर्तिलाई लिङ्क परिवर्तन गर्नुहोस्। तर यो डोमेन पहुँच छ भने मात्र सम्भव छ। अक्सर, प्रयोगकर्ताहरूले मात्र नातेदार पहुँच प्राप्त र विभिन्न तत्व गर्न लिंक परिवर्तन गर्न सक्दैन।
SSL त्रुटि र Google Chrome
मिति, इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको बहुमत गुगल क्रोम ब्राउजर प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर यसलाई त्यहाँ अक्सर तथाकथित SSL-त्रुटि उत्पन्न हुन्छ। पहिले, प्रयोगकर्ता साँच्चै ध्यान, किनकी तपाईं बस "जारी" बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, र नै बेपत्ता समस्या भुक्तानी थिए सन्देशमा देखिन्छ। क्रोम SSL बग को नयाँ संस्करण को रिलीज संग थप र प्राय देखा पर्न थाले, र असक्षम साइट प्रयोग गर्न जारी राख्न सक्ने क्षमता। यो, पाठ्यक्रम, यो धेरै समस्याहरू, धेरै केही मानिसहरू यो सन्देश ब्राउजरमा देखिन्छ जब गर्न के थाहा किनभने ल्याए।
Chrome मा त्रुटि निर्णय
समाधान एकदम सरल छ। "प्रमाणपत्र त्रुटि" - तपाईं लिनक्स प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं विशेष विकल्प "उपेक्षा" ध्यान गर्नुपर्छ। विन्डोज प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं लक्षित आइकनमा, दायाँ-क्लिक गर्नुहोस् र थप नजिकै क्षेत्र "नाम" मा क्लिक गर्नुहोस् "उपेक्षा" आवश्यक - "प्रमाणपत्र त्रुटि"।
हार्ड SSL त्रुटि किन देखिन्छ व्याख्या गर्न पर्याप्त। पनि कठिन व्याख्या गर्न यो अधिक संभावना जब तपाईं Google Chrome प्रयोग यसलाई देखिने छ किन। तर यी समाधान को माध्यम ले, तपाईं सन्देश साथ सँगै तपाईंलाई कि उठ्दा समस्याको बारेमा भूल गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले आउनेछ भने, र समस्या अझै पनि वर्तमान छ, खोजी व्यावसायिक मद्दत।
कसरी भाइरस लागि आफ्नो कम्प्युटर जाँच गर्न, वा साइबर-महामारी रोक्न
बुबाको जन्मदिन लागि उपहार
"Yandex-ट्याक्सी" को साझेदार कसरी बन्न? "Yandex-ट्याक्सी" को जडान लागि आवश्यकताहरू
वेल्डर "Svarog एआरसी 165": प्राविधिक विनिर्देशों, फोटो र समीक्षा